Sirdoonka kenya oo shaaciyey magaca shaqsigii ka danbeeyay weerarkii baska wajeer. | YoobsanNews.com
Sirdoonka kenya oo shaaciyey magaca shaqsigii ka danbeeyay weerarkii baska wajeer.
5 maalin kadib markii uu dhacay weerar shabaab ay ka geesteen magaalada wajer, ayaa arintaas waxaa faah faahin ka bixiyay Hay’adaha amaanka kenya.
Sirdoonka Kenya ayaa shaaciyey magaca Macalin iskuul degaanka kasoo jeeda oo hoggaaminayey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen dad saarnaa bas marayey Wajeer, oo lagu dilay 13 qof oo u badnaa saraakiil.
Wararka ay baahiyeenwarbaahinta Kenya, ninkan ayaa lagu magacaabaa Maxamed Xuseen Xasan, wuxuuna macali ka ahaa Dugsi Hoose oo ku yaalla degmada Wajeer, wuxuuna muddo ka hore gudaha Kenya geeyay maleeshiyooyin ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo la qabtay dad ay ka mid tahay xaaskiisa oo su’aalo la weydiiyey.
Weerarkii Wajeer oo ay sheegtay Al-Shabaab, kana mid ahaa kuwa ugu khasaraha badan ayaa dadka lagu dilay waxaa ka mid ahaa 8 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Booliska Kenya.
Weerarka ayaa waxaa lagu qaaday Bas ku socday Mandheera, waxaana jidka u galay maleeshiyo ka badan 15 Nin oo uu hoggaaminayay Maxamed Xuseen Xasan, kuwaasoo dadkii Baska saarnaa u kala saaray muslimiin iyo Kirishtaan, kadibna laayey dadkii aan muslimka ahayn.
Sidoo kale Ururka Al-Shabaab ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay gudaha dalka Kenya, waxayna dhawr jeer ka fuliyeen gudaha Kenya weeraro khasaaro badan geystay.
Previous: Hoggaanka Madasha xisbiyada qaran oo diginin ka soo saaray dagaalka Mudug..
Next: Golaha wakiillada dowladd goboleedka Puntland oo xubinnimadii xildhibaannimo kala noqday Cabdixakim Dhoobo..